トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Meaning of isikhundla omuhle kanye nesikhundla reverse Tarot "ukuzithiba ebulilini", umlingani imizwa?
"Temperance" isikhundla reverse incazelo
ngendlela efanele 3500 yen kuya umbhuli uthole asihlole khulula
nguye esikhathini Major Arcana ekhadini "ukuzithiba ebulilini" okungukuthi, ukuthi izinto esitebeleni kubonisa. ? Inhlalo engenayo inxushunxushu Toka kokulondoloza, kodwa kusho ukuthi isimo senziwa ngokuqinile ukuphathwa, Toka uyakwazi ukugcina ubungane zisesimweni esikahle uthando, ubungane izimpawu lokuguqulwa uthando, ukuthi sihlanganisa incazelo ujabule, ezifana kubonakala, it is a sici sale ikhadi.
e ukugeleza enkulu bebodwa ingenze lutho ukuphoqelela ukhanda, okwamanje Akukona ukuthi kwenzeke ushintsho olukhulu kangaka, ukuthi akukho uphawu ezenzeka ngokushesha esiseduze esizayo, cishe okushiwo temperance umele . Uma
"bashabalala 'zezinye imizwa party
sokuzila into ethile sesimweni esihle Kusolwa ukuthi kusho waphuma sesimweni esihle, ngaphezu, lamanje indawo yabo okusho ukuthi isimo samanje uzinzile noma babe naye ukuba isimo yalokho okuhle, kusho ukuthi isimo ubusiswe nge imibono nemicabango ukuthi uhlaliseke. Othandweni
, ngoba umuzwa omuhle kakhulu, ungase uzwe ithuba lokukhula ube nothando ngesikhathi ukugxisha ibanga phakathi kwakhe kancane kancane. Leli khadi kungalindeleka ukuthi nobuhlobo naye ukuba bathuthuke. Ngale ndlela ngoba enomuzwa ethokomele kakhulu ukuba nawe, kuwumqondo omuhle ukuba bagxile sihlale sizinzile yayo. Okuvamile ngu nekwendlala indlela, kungase futhi crap ingabe ukuvuma izono ezivela kuye. Uma
"ukuzithiba ebulilini" kulesi sikhundla reverse imizwa wenye inhlangano
bashabalala ukuhlanekezela isikhundla Kusolwa ukuthi kusho waphuma, noma kwenzekani ukukhathazeka yabo ngesimo esikhathini esizayo esiseduze, isimo nemicabango kubonisa ukuthi kukhona kungenzeka ukuthi kuyoba esinamafu. Kuze isimo esitebeleni kwenzeka into enkulu, ezifana umdlalo-ukushintsha, kungase kube isimo siba engazinzile Akukona, hhayi silondoloze umuzwa mnene, kungase babe wokwakha babe ngokomzwelo. Yilokho uthando
, lapho sibhekene nje umzukuzuku ngokushushiswa nangobunzima, kungase kube imizwa yakhe iba ukuthi. Uyozizwa nokukhathazeka ezikwenza uphelelwe isineke, lula kangaka lutho, ngaphandle kokuhlolisisa yonke into eziyibonayo imizwa yakhe, kangcono buqamama kungaba kuhle. Toka babe esanda angafakaza kwenye inhlangano ukuba ukhathazekile, Toka bayolizwa izinkulumo ezinjalo njengethuba abaphazamisa ukuthula kwengqondo yakho, ungaba iyiphi inombolo izimo. Uma isikhundla reverse
temperance waphuma, ngomoya ophansi ukuqonda ukugeleza isiphetho, kubalulekile ukuba enze izinto ngendlela ehlelekile bebodwa. Kungcono ukuthi ngangokunokwenzeka kulahliwe, ezifana ukuhaha nezifiso zezwe kukhona, ukwenza kube lula ukuba ngomoya ophansi baqonde ukugeleza, futhi ushiye umzimba ukugeleza isiphetho uzoyiswa a plus for bo khe behavior.